Tuesday, April 2, 2013 Fraịde, Septemba 14, 2018 Douglas Karr
A na-eji algorithm na-eme ka ihe ndị na-eme ka ọ pụta ìhè n'ihi na ihe niile ọ chọrọ bụ nwa ojii SEO onye na-ewu njikọ njikọ-ọgaranya na saịtị. N'ime oge, n'agbanyeghị ebe e wuru njikọ ndị ahụ, saịtị ahụ ga-ebili n'usoro. Google maara na nchọta njin nchọta ihe ha na-agba ọsọ ma mekwaa algorithms ha iji bulie ọdụ ndị ọzọ dị mma. Ogo saịtị njikọ na mkpa nke ọdịnaya ha rụrụ ọrụ dị ka nke ọma
Ọ bụ ezie na m na-eru nso 2,000 blog posts na Martech Zone, ọ pụtaghị na ndị niile na-arụsi ọrụ ike m wụsara ọ bụla post na-ghọtara. Ọ bụ mmadụ ole na ole na-aghọta ya, mana ọ ga-ekwe omume ịtụte akwụkwọ ochie ochie ma nweta okporo ụzọ ọhụụ. N’izu a, ngwaahịa ọhụrụ kụrụ n’ahịa dị egwu maka iweghachi akwụkwọ ochie. (A pụkwara iji ya na ibe weebụ, kwa, n'ezie). SEOPivot na-enyocha peeji nke saịtị gị na